Rabb jechuun maal jechuudha? Akka afaan Arabiffaatti jechi Rabb jedhu jecha tarbiyaa jedhu irraa kan fudhatameedha. Tarbiyaa jechuun kunuunsu, guddisuu fi barsiisudha. Akka lugaatti jechi Rabb jedhu hiika baay’ee qaba. Isaan keessaa Murabbii (kan guddisuu fi kunuunsu), Maalik (Mooti), Sayyid (Bulchaa), Mudabbir (Qindeessaa), Mun’im (kan waa hunda qananiisu)…